मन पनि सुन्दर हुनुपर्छ::Best News Experience from Nepal
नारी सुन्दर देखिन के के गर्नुपर्छ ?
सुन्दरता नारीहरुको गहना हो । यद्यपी बाहिरबाट मात्र सुन्दर देखिएर हुँदैन, आफ्नो मन पनि सुन्दर हुनुपर्छ । सधैं सकारात्मक सोच्नु पर्छ , खुशी रहनु पर्छ अनि शरीरमा तेज र चमक आउँछ । शरीरलाई फिट एण्ड फाइन राख्नुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ , पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । सस्तो भन्दैमा जस्तोसुकै सौन्दर्यका सामाग्री प्रयोग गर्नु हुँदैन । सधै ब्राण्डेड सौन्दर्यका सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । आफुलाई सुहाउने खालको साजसज्जा गर्नुपर्छ । तब मात्र नारी मात्र होइन सबै मान्छे बन्न सकिन्छ ।
छालाको स्याहार गर्नको लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्छ, घाम, धुलो, मैलोबाट बच्नुपर्छ । ब्राण्डेड श्रृंगारको सामान प्रयोग गर्नु पर्छ सस्तो खालका सौन्दर्यका सामाग्रीमा खतरनाक रसायन मिसिएको हुन्छ जुन छालाकोलागि हानिकारक हुन सन्छ । त्यसैले स्तरीय फेश वास, क्लीजिङ मिल्क, टोनर, स्कीन लोसन ,मोस्चराइजर,फेस प्याक र सन ब्लक लोसनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
जाडो मौसममा छालाको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ ?
जाडो मौसममा छनलामा थुप्रै समस्या देखापर्छन् । यसबीच वातावरणमा नरमपनको कमीसँगै छाला सुख्खा, कान्तिहीन हुन्छ र छालामा पाप्रा आउँछ । जाडोमा चिसोकै कारण घरबाहिर निस्कदा पनि सुरक्षित हुन सकिँदैन । यसबाहेक घरमा प्रयोग गरिने हिटर तथा तापमान नियन्त्रण गर्ने अन्य कृत्रिम उपकरणले पनि छालाको नरमपन सोस्छ । छालाको नरमपन तथा कान्ति फर्काउन विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
चिसो हावाबाट छालालाई सुरक्षा प्रदान गर्न मोइस्चराइजर क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ । शरीरमा लगाइने एन्टिइजी ओयली स्किन, ड्राई स्किनसहित विभिन्न किसिमका मोइस्चराइजर क्रिम बजारमा उपलब्ध छन् । तीमध्ये आफ्नो छालाको प्रकृति अनुरूप कुनै पनि क्रिम छनोट गर्न सकिन्छ । छालालाई कुनै पनि क्षतिबाट जोगाउन शरीरको खुल्ला भागमा १५ भन्दा बढी एसपीएफको सनस्क्रिन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बढ्दो उमेरसङ्गै छालाको हेरचाहा कसरी गर्ने ?
जति,जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति-त्यति छालाको संरचना पनि फरक हुँदै जान्छ । त्यसैले छालालाई बढी स्याहार गर्नु आवश्यक छ । छालाको सुन्दरता कायम राख्नको लागि हामीले आफ्नो दैनिक खानपानमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घामबाट छालालाई जोगाउन मोस्टराईजरको प्रयोग बढी गर्ने । धूम्रपान तथा मद्यपानको सेवन नगर्ने । दैनिक कम्तीमा आठ गिलास पानी पिउने । हप्तामा एकपटक फेसप्याक लगाउने । नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने । बढी मानसिक तनाव नलिने जस्ता कारणले छालालाई बचाउन सकिन्छ ।
मेकअपको महत्व कस्तो अवस्थामा बढी देख्नुहुन्छ ?
तपाई कोही नयाँ साथी, बिजनेश पार्टनर, अफिसियल सम्बन्धित अधिकारी वा चर्चित, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नै किन नहोस उनीहरुलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने उसलाई पहिलो नजरमा नै सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने भनेकै लुक्स हो । लुक्स निर्धारण नै मेकअपले गर्छ । अवस्था अनुसार मेकअप गर्न जरुरी छ ।
तपाई व्यूटिसियन संघ प्रदेश पाँच को महासचिव हुनु हुन्छ ,के कस्ता काम भएका छन् ?
हामीले व्यूटिसियन तथा सौन्दर्य क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण महिला दिदी बहिनीहरुलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर हुने बनाएका छौ । त्यसो त आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थीत गर्नका लागी निश्चीत दर,रेट कायम गरेका छौ । व्यवसायीक हित संगठन विस्तार लगायतका विषयमा हाम्रो मुख्य ध्यान रहेको छ ।